လျှောက်လွှာ: John Leggott ကောလိပ်
privacy နှင့် GDPR
Arabic Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) English Japanese Korean Latvian Lithuanian Myanmar (Burmese) Romanian Russian Spanish Turkish Ukrainian Vietnamese
login / မှတ်ပုံတင်မည်
အေးဂျင့်များ / JLC မိတ်ဖက်များ
ယခင် / လက်ရှိပညာရေး
သင့်လျှောက်လွှာပြီးပါပြီ သင်၏လျှောက်လွှာကိုပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုသင် ပြောင်းလဲ၍ မရတော့ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ပထမဆုံးအကြိမ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြစ်ပါက၊ သင်ဝင်ရောက်ခြင်းသည်သင်အတွက်အကောင့်အသစ်တစ်ခုဖန်တီးလိမ့်မည်။ သင်၏လျှောက်လွှာကိုနောက်အဆင့်တွင်ဖြည့်ရန်သင်ပြန်လာနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏စကားဝှက်ကိုမှတ်သားပါ။
စကားဝှက်များသည်ရှည်လျားသော 8 နှင့် 20 အက္ခရာများအကြားရှိရမည်။
login / မှတ်ပုံတင်မည် စကားဝှက်ကိုမေ့နေပါသလား?
Password ကို Reset ငါတကယ်တော့စကားဝှက်ကိုငါသိ၏
ဘာလျှောက်ထားလဲ ကျွန်ုပ်လျှောက်ထားသည် - တစ် ဦး 16-19 လျှောက်ထား HE / Foundation သင်တန်းလျှောက်ထားသူ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားလျှောက်ထားသူ
သင်သည်သင်၏လျှောက်လွှာအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့်သင်နောက်မှ ပြောင်းလဲ၍ မရပါ၊ သင်၏ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ကြောင်းသေချာပါစေ။
လျှောက်ထားသူအားလုံးကိုအင်တာဗျူးပေးမည်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းသည်သင်တန်းရွေးချယ်မှုများ၏အလွတ်သဘောဆွေးနွေးမှုကိုခွင့်ပြုပြီးသင်၌ရှိကောင်းရှိသည့်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့အားဖြေဆိုရန်အခွင့်အရေးပေးလိမ့်မည်။ ကောလိပ်သည်မိဘများကိုတက်ရောက်ရန်ဖိတ်ခေါ်သည်။
1998 အချက်အလက်ကာကွယ်ရေးအက်ဥပဒေမှအောင်မြင်သည့်အထွေထွေဒေတာကာကွယ်မှုစည်းမျဉ်းများ (GDPR) တွင်ဂျွန် Leggott ဆဌမပုံစံကောလိပ်ကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းများသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သို့စုဆောင်း၊ ကိုင်တွယ်သိမ်းဆည်းရမည်ကိုဖော်ပြသည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ကိုင်တွယ်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အပြည့်အစုံအတွက် ကျေးဇူးပြု၍“ သီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက် - ကျောင်းသားလျှောက်ထားသူများ” တွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် https://www.leggott.ac.uk/privacy/.
အကယ်၍ သင်သည်အရာရာကိုပြီးစီးခဲ့ပြီးအမှားအယွင်းများမရှိလျှင်သင်၏လျှောက်လွှာကိုသင်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ တင်သွင်းခြင်းတစ်ချိန်ကသင့်လျှောက်လွှာကိုမပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့်၊ မတင်သွင်းမီအကုန်လုံးစစ်ဆေးပါ။
သင့်လျှောက်လွှာပြီးပါပြီ သင်၏လျှောက်လွှာကိုပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ဤပုံစံကို သုံး၍ သင် ပြောင်းလဲ၍ မရတော့ပါ။
ယောဟနျသ Leggott ကောလိပ်
အနောက်ဘုံလိန်း, Scunthorpe, North Lincolnshire, DN17 1DS
Tel: + 44 (0) 1724 282998 •အီးမေးလ် info@leggott.ac.uk